नेपालगन्जमा कोरोनाले झुक्यायो, संक्रमितमा लक्षण नै छैन – Yug Aahwan Daily
नेपालगन्जमा कोरोनाले झुक्यायो, संक्रमितमा लक्षण नै छैन
युग संवाददाता । २३ बैशाख २०७७, मंगलवार ०८:०४ मा प्रकाशित
623 पटक हेरिएको
बाँके, २३ बैशाख ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ मा आइतबार १५ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भयो । योसँगै नेपालगन्जमा संक्रमितको संख्या १६ पुगेको छ । शुक्रबार नेपालगन्ज–५, डीएसपी रोडका ६० वर्षीय व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि ९० जनामा परीक्षण गर्दा अरूमा पनि कोरोना संक्रमण भेटिएको हो ।
अझै केहीको रिपोर्ट र कतिको जाँच गर्न नै बाँकी छ । एकै दिन १५ जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि नेपालगन्जवासी त्रसित भएका छन् । नेपालगन्जमा कसरी कोरोना संक्रमण फैलियो ? रोकथामका लागि के–के प्रयास भइरहेको छ ? स्थानीयहरूको अवस्था कस्तो छ ? उपमहानगरपालिकाले के गर्दै छ ? यी नै विषयमा हामीले उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरसँग गरेको कुराको सम्पादित अंश :
खुल्ला सीमा, भारतको असहयोग
नेपालगन्ज नेपाल–भारत सीमाको नजिक छ । २ देशबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । सांस्कृतिक, व्यापार व्यवसाय पनि जोडिएको छ । यो बीचमा कोरोना भाइरस फैलिँदै गयो । लकडाउन पनि भयो । तर, लकडाउनको पूर्ण पालना भने भएन । सीमानाकाबाट मान्छे आउनेजाने क्रम रोकिएन । सीमानाकामा अनुगमन पनि भएको छ । मुख्या नाका बन्द छ । तर, खुला सीमाका कारण सहायक नाकाबाट मान्छे आउनेजाने क्रम रोकिएको छैन । यो ठूलो समस्या हो । भारतले उतै रोक्नुपर्ने हो । भारतबाट सहयोग नहुँदा समस्या देखिएको हो ।
सुरुमै जाँच भएन
बाहिरबाट आएका मान्छेलाई सुरुमै जाँच गर्न पनि सकिएन । जाँचका लागि सुरुदेखि नै आवाज उठाएका हौँ । जाँचका लागि ल्याब नहुँदा समस्या भयो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा ढिला गरी ल्याब बनाइयो । नेपालगन्जमा ढिला गरी टेस्ट हुँदा कोरोना भाइरसले फैलिने मौका पायो । ६० वर्षका पहिलो संक्रमितबाट अरूलाई र्सयो कि अरूबाट उनलाई र्सयो भन्ने नै थाहा भएको छैन ।
लकडाउनको पालना भएन
नेपालगन्जमा भेटिएका पहिलो व्यक्ति मदरसामा पढाउनुहुन्छ । उहाँलाई पोजिटिभ देखिएपछि ९० जनाको स्वाब संकलन गरियो । ६० जनामध्ये १५ जनामा पोजिटिभ देखियो । पोजिटिभ देखिने अधिकांश मदरसामा पढ्ने बालबालिकाको परिवारलाई देखिएको छ । अझै ३० जनाको रिपोर्ट आउनै बाँकी छ । सुरुमै जाँच गर्न पाएको भए र लकडाउनको पूर्ण पालना भएको भए आज यति धेरै कोरोना संक्रमित देखिने थिएनन् । मुस्लिम समुदायको मुस्लिम आयोगले मस्जिदमा बस्नेहरूको जाँच गर्ने निर्णय गरेपछि ५/६ वटा मस्जिदमा टेस्ट गरियो । त्योमध्ये वडा नम्बर ८ मा रहेको मस्जिदका मौलनामा पोजेटिभ देखियो । अरू वडामा देखिएको छैन ।
कोरोनाले झुक्यायो, संक्रमितमा कोरोनको लक्षण नै छैन
उपमहानगरले कडाइ गर्दागर्दै पनि कोरोनाले झुक्यायो । हामी कोरोनाको लक्षणको पछि दौडियौँ । जसलाई लक्षण देखिएको छ, उसको परीक्षणमा मात्र जोड दियौँ । तर, आइतबार पोजिटिभ देखिएका कसैलाई पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । ज्वरो, रुघा, खोकी केही पनि छैन । लक्षण नभएकालाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो ।
कोरोना भेटिएको टोलमा सिल
जहाँ कोरोना देखिएको छ, त्यो टोललाई मात्र सिल गरेका छौँ । उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकालाई पनि टेस्ट गर्ने तयारी गरिएको छ । आवश्यक परे पूरै वडालाई सिल गर्छौं । अहिले ४ वटा ठाउँमा मात्र सिल गरिएको छ ।
सिल गरिएको ठाउँमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । त्यसलाई पनि हामी मिलाउँछौँ । केही दिन सिल गरेर नै सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संक्रमितको संख्या बढे कहाँ राख्ने ?
संक्रमितको संख्या बढ्यो भने कहाँ राख्ने, के गर्ने भन्ने समस्या पनि छ । अहिले देखिएका संक्रमित सबैलाई सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा राखिएको छ । उपमहानगरले पनि अस्थायी बनाएको छ । तर, भेन्टिलेटर वा अक्सिजन चलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ । कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई प्रयोग गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।